Kedu ihe ntanetị YouTube na-ekwu? - SoNuker
Kedu ihe ntanetị YouTube na-ekwu?
Ọ bụ ezie na YouTube ekpugheghị kpọmkwem otu algorithm ya si arụ ọrụ, ndị na-ere ahịa dijitalụ nwere ezigbo nghọta banyere otu esi arụ ọrụ. Nke a pụtara na ị ga-amata ihe metric YouTube dị mkpa, si otú a na-enyere gị aka ịbawanye echiche gị ma bulie ogo gị.
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ọnụọgụ ọnụọgụ bara uru ị attentiona ntị na azụmaahịa YouTube, ndị a bụ ụfọdụ ndị kachasị mkpa.
Mmetụta Pịa-site na Ọnụego (CTR)
Mmetụta pịa-site na ọnụego (CTR) na-ezo aka na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ hụrụ vidiyo gị thumbnail wee pịa ya iji lee vidiyo ahụ. Nke a bụ mmụba dị irè nke etu esi arụ ọrụ ntaneti vidiyo gị, aha na nkọwa ndị na-akpali ndị mmadụ ilele vidiyo ahụ. Ọ bụrụ na mmetụta gị pịa-site na ọnụego adịghị elu dị ka ị ga-achọ ka ọ bụrụ, ọ pụtara na ịkwesịrị imeziwanye njide vidiyo gị iji mee ka ọ dịkwuo mma.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ozugbo ị bipụtara vidiyo gị, mmetụta CTR gị ga-adị elu. Nọmba ahụ ga-amalite ịdata wee kwụsie ike ozugbo vidiyo ahụ gafere ndị na-ege gị ntị.
Kaadị Pịa-site na Ọnụego
Kaadị CTR na-ezo aka na ọnụ ọgụgụ nke clicks na otu kaadị na vidiyo gị na-enweta. Kaadị bụ obere slide-in panel nke ị nwere ike itinye na vidiyo gị, na ịpị ha, ndị ọrụ nwere ike iduzi ha na vidiyo ọzọ, na weebụsaịtị gị, denye aha na ọwa gị, wdg. Ndị a bụ ole na ole n'ime omume dị iche iche. kaadị ahụ na-enye ndị ọrụ ohere ịme.
Kaadị CTR gị na-agwa gị ihe omume kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-ege gị ntị, kedu ụdị kaadị kachasị dị irè n'ịbawanye okporo ụzọ na weebụsaịtị gị, na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha, wdg.
Oge nche, dị ka aha ahụ na-egosi, bụ oge niile ndị na-ekiri ha na-ele na vidiyo gị, a na-atụle ya na nkeji. Nke a bụ otu ihe dị mkpa metric YouTube n'ihi na oge elele gị dị elu, ka YouTube algorithm ga-akwado vidiyo gị.
A na-eche na vidiyo nwere oge nche dị elu na-arụ ọrụ karịa ma yabụ, ha nwere ike ịpụta karịa na nsonaazụ ọchụchọ na aro.
Nkezi Ogologo Oge Ogologo Oge
Ogologo oge elele anya bụ ihe dị mkpa metric nke na-egosipụta etu vidio gị si emetụta ndị na-ekiri ya. Ogologo oge elele anya bụ oge elekere anya zuru oke nke ọnụ ọgụgụ vidiyo gị vidiyo na-enweta, gụnyere replays.
Ọ bụrụ na vidiyo gị anaghị arụ ọrụ zuru ezu, ndị ọrụ ga-agba ọsọ ngwa ngwa wee hapụ gị oge ịdị ala dị ala. Agbanyeghị, vidiyo nke nwere ike itinye ndị na-ekiri ọ bụghị naanị na-eweta oge elekere dị elu na nkezi ele oge, mana ọ ga-akwalite ọkwa ọchụchọ.
Elele Pasent Nke A Na-ele
Crucialkpụrụ ọzọ dị oke mkpa nke otu esi etinye vidiyo bụ nkezi elele anya. Onu ogugu elele bu onodu vidio gi na ndi nlere anya na-ele ya.
Nke a bụ nnukwu ihe nlere nke vidiyo gị nwere iji jide uche nke ndị na-ekiri gị maka ya dum. Enwere ike ịchọta metric a na akụkọ oge nche gị.
Nke a na-ezo aka oge ole ndị na-ekiri gị na-elele akụkụ ụfọdụ nke vidiyo ahụ site na ịlaghachi na ngalaba ahụ. Nyochaghachi dị mkpa n'ihi na ha na-agwa gị akụkụ nke vidiyo gị nke ndị na-ekiri na-achọta ihe na-adọrọ mmasị ma ọ bụ nlebara anya. Ọ pụtara na isiokwu a kapịrị ọnụ ị na-ekpuchi n'akụkụ nke vidiyo ahụ bụ ihe kachasị amasị ndị na-ekiri gị. Nke a nwere ike inyere gị aka na atụmatụ na atụmatụ gị.
Lezienụ anya maka usoro ndị a na nchịkọta YouTube gị ma kwe ka ha duzie gị n'ịmepụta ọdịnaya ka mma na atụmatụ amamihe YouTube!
Mgbasa ozi 4 nke mepụtara nnukwu Buzz na YouTube na nso nso a
Obi abụọ adịghị ya na YouTube aghọwo paradaịs maka ndị na-ere vidiyo. Gịnị mere na ọ gaghị adị? Ikpo okwu nwere nde mmadụ abụọ na-arụ ọrụ kwa ọnwa na 73 pasent nke ndị okenye America. Ghara ichefu, atumatu ya…
8 fectzọ dị irè iji bulie & Meewanye ndị debanyere aha YouTube
Anyị nọ ugbu a na afọ dijitalụ ebe mgbasa ozi mmekọrịta na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ nke ọgbọ ọ bụla, ma ọ bụ boomers baby, Generation X, millennials, and even Generation Z. Ihu ọma, onye ọ bụla na-adabere…
Etu esi eji YouTube maka ahịa Viral?
Mgbe Facebook gasịrị, ikekwe ọ bụ YouTube na-ama jijiji na ntanetị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ndị ọrụ 2 nde kwa ọnwa. The video-nkekọrịta ikpo okwu bụ nke abụọ kasị ukwuu search engine na ụwa (mgbe Google, n'ezie),…